Sheekooyinkii Ugu Wanaagsanaa | maktabadda | Af-Soomaaliga
Category Archives: Sheekooyinkii Ugu Wanaagsanaa
21/05/2014 Sheekooyinkii Ugu WanaagsanaaCabdiRisaaq Maxamed Cilmi “ina Warfaa”maamule
CabdiRisaaq Maxamed Cilmi “ina Warfaa”
Weli lama daabicin kitaabkan. Qof kasta ayaa xaq u leh inuu daabacdo kitaabkan oo ma dhowrsana.
La soo xiriirka qoraha ee ku saabsan kitaabka: Haddii aad xiiseyneysid kitaabkan oo aad dooneyid inaad ogaato sidii lagu heli lahaa, iyo haddii aad ku aragtid khaladaad, Eebbe kaliya ayaa dhamaystirane ha kaa abaalmariyo. Waxaad fadlan kala soo xiriiri kartaa qoraha kitaabkan cinwaanka bariidka xaasuubkiisa “e-mailkiisa” oo ah: ina_warfaa@hotmail.com.
Waxaan ugu horrayntii u mahadnaqayaa Eebbe, oo igu galadaystay nimcooyin tira badan oo aanan koobi karin. Ka dibna waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii igu caawiyey talo, fikrad iyo dhiiragalin waxaan idin leeyahay
ulajeedadaydu waxay tahay in aan ugu dhawaado Eebbe, aniga oo ugu qoraayo afka soomaaliga
sheekooyin islaami ah, dadka jecel rabana iney u sii gudbiyaan caruurtooda.
Waxaan ugu dambayntii Eebbe ka baryayaa in uu aniga “qoraaga” kitaabkan iyo intii i caawisayba
uu miisaanka wanaagyadeena noogu daro maalin aysan xoolo iyo caruur waxba tarayn.
Jimce, 16.12.1427 H. oo ku aaddan 5.1.2007 M.
Nebi Aadan nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Wuxuu ahaa aabihii dadka oo dhan, Eebbaa dhoobo ka abuuray una tujisiiyay malaaigtiisa, waxaan ka ahayn Sheydaan, oo diidey inuu u tukado nebi Aadan. Eebbana wuxuu ku yiri Sheydaankii maxaadan u sameyn waxaan ku faray, Sheydaankii oo islaweyni iyo xasad ka buuxo ayaa ku jawaabey: Aniga ayaa ka wanaagsan nebi Aadan, oo waxaad iga abuurtey dab, isagana waxaad ka abuurtey dhoobo.
Markaas baa Eebbe ku yiri Sheydaankii waxaa tahay mid laga fogeeyay naxariisteyda.
Sheydaankiina wuxuu Eebbe ka baryey inuu u kaadiyo inta laga gaarayo aakhiro, Eebbana wuu ka aqbalay. Kolkaas buu wuxuu doonay inuu aarguto, oo wuxuu yiri: Eebbow sharaftaadaan ku dhaartee dhamaantood “dadka” waan baadiyeen, waxaan ka ahayn adoomadaada daacadda kuu ah.
Eebbana wuxuu ku yiri Sheydaankii: Waxaan ka buuxin naarta Jahanamo adiga iyo wixii ku raacay dhamaantood. Eebbana wuxuu baray nebi Aadan magacyada. Wuxuuna u abuuray xaaskiisii Xaawo, dejiyeyna labadoodii janada, ugana digay ineysan u dhowaan geed ku yaalay jannada, hase ahaatee sheydaankii ayaa shaki ku abuurey oo wuxuu ku yiri: Ma idin tusaa geed haddaad cuntaan aydan weligiin dhimaneyn aadna heleysaan boqortooyo aan dhamaaneyn dabadeedna wey cuneen, ka dibna Eebbaa dhulka u soo dejiyey, waxayna weydiisteen dembidhaaf wuuna ka aqbalay. Eebbana wuxuu awoodsiiyey iney ku noolaadaan dhulka. Farayna iney isaga keligiis caabudaan kuna booriyey dadka taasi, kana yeelay rasuulkii Eebbe ee loo soo direy ilmihiisii, wuxuuna ahaa nebigii ugu horeeyey.
Nebi Nuux nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaa dhowrsane runlow ah, oo Eebbe u soo direy dadkiisa inuu hanuuniyo, ugana digo cadaabka aakhiro isagoo leh: Tolkeeyow, Eebbe caabuda mana lihidiin Eebbe isaga aan ahayn waxaan idinkaga cabsanayaa cadaab maalin weyn. Markaas bey waxay ugu jawaabeen: Runtii Nuuxow waad baadiyeysan tahay. Markaas buu wuxuu nebi Nuux ugu jawaabay: Tolkeeyow ma baadiyeysni ee hase ahaatee waxaan ahay rasuul Eebbe soo direy waxaan idin soo gaarsiinayaa risaalada Eebbehey waana idinla talin oo waxaan Eebbe ka ogahay waxaydaan ka ogeyn. Markuu nebi Nuux ogaadey iney rumeyn doonin intii horey u rumeysey mooyee. Ayuu wuxuu yiri Kii i barbaariyow dhulka ha uga tegin qof gaal ah. Oo wuxuu sii raaciyey haddaad qof gaal ah dhulka uga tegtid waxay baadiyeynayaan adoomadaada mana dhalayaan ku xun oo gaal ah mooyee. Ka dib baa Eebbe faray inuu markab sameeyo, oo uuna markabkaasi saaro lamaane kasta oo ku nool dhulka ay ka mid yihiin mu’miniintii rumeysey, hase ahaatee aysan ku jirin xaaskiisa iyo wiilkiisa oo iyagu waxay ahaayeen gaalo. Dabadeed baa waxaa yimid duufaan oo dadkii gaalada ahaa biyihii ku wada dhinteen.
Nebi Huud wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Caad oo loo soo direy. Reer caad waxay ahaayeen dadka ugu dheer uguna xoog weyn xiligoodii, waxayna ku faani jireen xoogooda. Hase ahaatee waxay ahaayeen gaalo, oo waxay caabudi jireen sanamyada, weyna difaaci jireen, una dagaalami jireen sanamyadooda dartood. Nebigoodana wey beeniyeen, weyna ku jeesjeesi jireen. Waxay ahayd reer Huud maadaama ay is og yihiin iney ugu xoog weyn yihiin dadka, iney ogaadaan
Eebbihii iyaga abuuray inuu iyagana ka xoog badan yahay.
Nebi Huudna wuxuu ku oran jirey dadkiisa eraygii ay nebiyada oo dhan ku dhihi jireen dadkooda. Oo wuxuu ku dhihi jirey: Dadkeeyow Eebbe caabuda ma lihidiin Ilaah isaga aan ahayn ee miyeedan cabsanayn.
Nebi Saalax wuxuu Eebbe u soo direy reer Samuud. Waxay ahaayeen dad abaaldaran, maxaa yeelay Eebbaa wuxuu siiyey xoolo fara badan, hase ahaatee Barbaariyahooda ma aysan rumeyn ee waxay caabudi jireen sanamyada ay kadhaxleen aabayaalkoodii. Reer Samuud waxay isugu faani jireen awoodooda. Dabadeed baa Eebbe u soo direy nebi Saalax inuu ugu bishaareeyo jano hadday rumeeyaan, ugana digo naar hadday rumeyn waayaan, hase ahaatee wey beeniyeen. Waxayna ka codsadeen inuu ula yimaado calaamad ay ku gartaan inuu nebi yahay si ay u rumeeyaan, wuxuuna ula yimid nebi Saalax hal. Wuxuuna faray reer Samuud ineysan dhibin, hase ahaatee waxay ku adkeysteen islaweynidoodii oo dabadeed waxay dileen hashii.
Eebbana wuxuu ku ciqaabay qeylo daran, markaas bey halkii ku dhinteen. Waxaana Eebbe halkii ku badbaadiyey nebi Saalax iyo intii rumeysey.
Eebbe wuxuu nebi Luud u soo direy dadkiisii, si uu u hanuuniyo uguna yeero iney caabudaan Eebbe. Waxayna ahaayeen dad xun oo sameeya xumaanta, kuna xadgudba martida. Waxayna ahaayeen rag ka raadiya xumaan ragga kale, oo markuu nebi Luud ugu yeeray iney xumaanta iska daayaan, waxay isku dayeen iney saaraan isaga.
Nebi Luud waxaa rumeeyay qaar ka mida reerkiisii, xaaskiisa iyadu ma rumeyn. Markuu nebi Luud ka quustey dadkiisii ayuu Eebbe wuxuu ka baryey in isaga iyo intii raacdey Eebbe badbaadiyo, laayana xumaan falayaashii. Waxaa dabadeed nebi Luud u yimid Malaaig, waxayna saareen nebi Luud iyo intii rumeysey, oo intii kale ee gaalada ahaa ku laayey dhagxaan sumadeysan.
Nebi Ismaaciil wuxuu ahaa curadkii nebi Ibraahin iyo marwo Haajar. Wuxuu uga tegey nebi Ibraahin xaaskiisii Haajar iyo ilmaheedii nebi Ismaaciil goob ku taaley Makka, Eebbe oo sidaa faray darteed, iyagoo heysta biyo yar iyo timir.
Markuu ka dhamaadey wixii yaraa ee ay wateen, ayey marwo Haajar bilowdey iney warwareegato iyadoo wax la cabo ama la cuno baadi goobeyso, ilaa Eebbe uu ku toosiyo biyihii Samsamka.
Waxaana u imaan jirey dad badan oo socoto ah, goobtiina waxay noqotey meel dad dego, biyihii Samsamka ee halkaasi ka dilaacay dartiis. Oo ka dib wuxuu Eebbe faray nebi Ibraahin inuu dhiso Kacbada oo waxaana la dhisey wiilkiisii nebi Ismaaciil. Ka dibna wuxuu nebi Ibraahin riyo ku arkey isagoo Eebbe farayo inuu gowraco wiilkiisii, wuxuuna u sheegay wiilkiisii nebi Ismaaciil. Wuxuuna ugu jawaabey nebi Ismaaciil:
Aabaheygow samee wuxuu Eebbe ku faray waan dulqaadan hadduu Eebbe yiraahdee. Eebbana wuu ka badbaadiyey gowricii. Wuxuuna ahaa nebi Ismaaciil mid dulqaad badan, balan oofiya oo farana reerkiisa tukashada iyo wax bixinta.
Wuxuuna dadka fari jirey in Eebbe keligiis la caabudo.
Nebi Isxaaq wuxuu ahaa ina nebi Ibraahin iyo marwo Saara, wuxuuna dhashay walaalkiis nebi Ismaaciil ka dib, oo waxay ahaayeen ilmo aabe. Malaaigtii ayaana ugu bishaareysey nebi Ibraahin iyo marwo Saara dhalashadiisii, markii ay u socdeen halkii ay deganaayeen dadkii nebi Luud loo soo direy, si ay u laayaan gaaladii xumaanta sameyn jirey. Eebbana wuxuu Qur’aanka noogu sheegay nebi Isxaaq inuu ahaa mid aqoon badan.
Kana yeelay nebi dadka ku hanuuniya falalka wanaagsan. Nebi Isxaaqna wuxuu dhalay nebi Yacquub oo loo yaqaaney Israaiil.
Nebi Yuusuf nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Yuusuf waa ina nebi Yacquub ina nebi Isxaaq ina nebi Ibraahin. Aabihiisna aad buu u jeclaa, waxaana la dhalatey kow iyo toban walaalo ah. Habeen habeenada ka mida ayuu wuxuu arkey kow iyo toban xiddig, qoraxda iyo dayaxa oo u tukanayaan. Nebi Yuusufna wuxuu u sheegay aabihiis wuxuu arkey, aabihiisna wuxuu ku yiri ha u sheegin walaalahaa. Hase ahaatee Sheydaankii ayaa ku abuurey maseyr walaalihiis, oo waxay isku raaceen iney ku ridaan ceel dheer guntiisa, oo waxay yiraahdeen waxaa cuntey yeey. Ka dib waxaa arkey dad reer miyi ah ceelkii ayeyna ka soo saareen, waxayna ku gateen lacag aad u yar. Waxaana ka gatey boqorkii Masar, xaaskiisii ayuuna farey iney korsadaan, hase ahaatee isagii ayey damacdey, markuu diideyna wey qiyaantey xabsi ayaana la geliyey. Ka dib baa Eebbe muujiyey inuu yahay dembilaawe, kana saarey xabsigii. Boqorkiina wuxuu madax uga dhigey arimihii dhaqaalaha, taasoo maamulkeeda si wanaagsan u hayey sanadihii abaarta. Ka dibna wuxuu u yeertay walaalihiis iyo waalidkiis, weyna u tukadeen “sharaf darteed”, halkaasna waxaa ku furantey riyadiisii.
Nebi Ayuub wuxuu lahaa xoolo fara badan iyo caruur badan, hase ahaatee Eebbaa imtixaaney oo wuxuu ka qaadey xoolihii iyo caruurtiiba, sidoo kale wuxuu ku ridey xanuuno fara badan oo hayey muddo badan heer ay gaartey iney dadkii ka fogaadaan, waxaan ka aheyn xaaskiisii oo iyadu wey u dulqaadatey, ilaa Eebbe caafimaadkiisii, caruurtiisii iyo xoolihiisii dib ugu soo celiyey.
Kor ahaaye Eebbana wuxuu ku yiri Qur’aankiisii sharafta lahaa isagoo amaanaya addoonkiisii Ayuub: Wuxuu ahaa mid dulqaata addoon wanaagsan runtii Eebbe u soo noqda.
Nebi Yoonis wuxuu Eebbe u soo direy dadkii Niinawaa. Wuxuuna ugu yeeray iney caabudaan Eebbe keligiis, hase ahaatee wey diideen weyna isla weynaadeen markaas ayuu nebi Yoonis iskaga tegey. Wuxuuna u sheegay in la cadaabi doono muddo saddax habeen ka dib. Kolkaas ayey cabsadeen oo rumeeyeen, Eebbana ma uusan
cadaabin. Wuxuuse nebi Yoonis raacay doon, markaas ayey doontii degi gaartey baddii gudaheeda, oo waxay go’aansadeen iney qori tuur sameeyaan oo qofkii ay ku soo aaddo saddax jeer qori tuurkaas lagu tuuro badda. Waxayna ku soo aaddey nebi Yoonis oo dabadeed wuxuu isku tuurey baddii, isla markiiba waxaa liqey nibiri, nibirigiina ma cunin Eebbe dartiis. Markaas buu nebi Yoonis baryey Eebbihiis inuu ka saaro gudcurka, Eebbana wuu ka aqbaley. Dadkii loogu soo direy inuu gaarsiyo risaalada: wuxuu Eebbe soo faray, waxay gaarayeen boqol kun iyo ka badan.
Eebbe baa labo Rasuul wuxuu u soo direy tuulo,
Markaas baa labadii Rasuul tuuladii rumeyn weysey. Kolkaas buu Eebbe u soo direy Rasuul saddaxaad tuuladii. Kor ahaaye Eebbe wuxuu
Qur’aankiisa noogu sheegay inuu rumeeyay nin, dadkiisiina ugu yeeray iney rumeeyaan rusushaas,
hase ahaatee wey dileen, oo dabadeed Eebbana geliyey janno.
Nebi Saleebaan Eebbaa wuxuu siiyey aqoon iyo xikmad. Wuxuuna baray hadalka shimbiraha iyo xoolaha kale, wuxuuna u fududeeyay dabeysha iyo Jinka. Nebi Saleebaan wuxuu soo booqan jirey ciidankiisii mararka qarkood. Markaas buu wuxuu waayey shimbirkii Hudhudka ahaa maalin maalmaha ka mid ah, dabadeed baa waxaa yimid Hud-hudkii markuu maqnaa in muddo ah. Wuxuuna ku yiri nebi Saleebaan waxaan ka imid
Saba’, waxaana kaaga sidaa war run ah oo waxaan ku soo arkey goobtaasi naag boqorad ah oo la siiyey wax walba, waxayna caabudayeen iyada iyo dadkeedaba qoraxda. Markaas ka dib buu nebi Saleebaan wuxuu qorey warqad, wuxuuna faray Hudhudkii inuu u geeyo warqaddaasi boqoraddii Saba’. Hudhudkiina wuxuu u geeyay warqaddii Balqiisa, markii ay heshay warqaddii nebi Saleebaan uu ku lahaa ha isla key weynaanina ee ii imaada idinkoo muslimiin ah. Kolkaas ayey Balqiisa iyo madaxdeedii waaweynaa u tageen
nebi Saleebaan. Ka dib markii Balqiisa ay aragtey wuxuu Eebbe siiyey nebi Saleebaan ayey
muslintey iyada iyo dadkeediiba, nebi Saleebaan ayaana guursadey Balqiisa.
Nebi Sakariye – Nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
Nebi Yaxye – Nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
Nebi Ciise nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Ciise waa sidii nebi Aadan oo kale oo wuxuu Eebbe ka abuurey ciidda, wuxuuna ku yiri ahow wuuna ahaadey. Nebi Ciisena waa ina Maryan rasuulkii Eebbe, ereygiisii uu ku ridey Maryan. Waana nebigii horey u sii sheegay inuu nebi Maxamed imaan doono. Eebbana wuxuu siiyey xujooyin, wuxuuna ku xoojiyey Ruuxul-Qudsi. Nebi Ciisena waa mid ka mida shanta rusul ee ugu weyn, isaga oo aad u yar ayuu dadka la hadley, wuxuu ka sameeyay dhoobo qaab shimbir ayuu intuu afuufey dabadeed shimbir noqotey, wuxuuna daaweeyay cudurada aan laheyn daawada, wuxuuna soo nooleeyay qof dhintey, intaas oo dhan oo mucjiso ah Eebbe ayaa u fududeeyay. Wuxuuna nebi Ciise dadkiisii ugu yeeray iney Eebbe keligiis caabudaan, hase ahaatee wey diideen, weyna isla weynaadeen, weyna ka soo horjeesteen, mana rumeyn dad yar mooyee. Eebbe ayaana cirka u qaadey, wuxuuna dhulka u soo dejin doonaa markuu doono si uu dadka marqaaati uga noqdo.
Luqmaan – Nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
Aasiyo – Eebbe ha ka raali noqdee
Boqoraddii mu’minadda ahayd…
Oo Fircoon ayaa u yimid inuu dilo – siduu ku samayn jirey ilmihii kale ee ay dhaleen reer Israaiil – oo waxay ka codsatay inuusan dilin; si ay uga dhigato ilmo maadaama aysan dhalin ilmo.
Sidaas ayuuna Eebbe ku badbaadiyey nebi Muuse oo uu ku noolaado gurigii Fircoon, Eebbe kor ahaaye wuxuu yiri: (Oo waxaan u waxyoonnay Hooyadii ”nebi” Muuse iney nuujiso oo haddaad u cabsato ku rid badda oo ha ka cabsan oo ha murugoon waannu kuu soo celin oo waxaannu ka yeeli mid ka mid ah rususha. Oo waxaa soo qaatay reer Fircoon si uu ugu noqdo col iyo murug runtii Fircoon iyo Haamaan iyo labadooda ciidan waxay ahaayeen dembiilayaal. Waxay tiri xaaskii Fircoon ”Aasiyo” waa inoo indho qabowsi aniga iyo adiga ha dilin waxaa laga yaabaa inuu wax na taree ama aan ka dhigano ilmo. (iyagoon dareemeyn). Alqisas 7-9.
Eebbana wuu ka aqbalay ducadeedii, maxaa yeelay waxay rumeysay Rabbigeedii, waxayna u adkeysatey iimaankeedii darteed si kastoo loo cadaabo, ka dibna waxay istaahishay iney ka mid noqoto dumarkii jannada ku waarayey oo rasuulkii Eebbe run buu sheegay markuu yiri: (Waxaa la dhamaystiray niman badan, lamana dhamaystirin dumarka waxaan ka ahayn Aasiyo xaaskii Fircoon, Maryan ina Cimraan, runtiina wanaaga Caaisho dumarka ka wanaagsan tahay waa sida Sariidka ”cunto ka kooban rooti, hilib iyo maraq” uu uga wanaagsan yahay cuntooyinka kale ). Albukhaari, Muslim, At-tirmidi iyo ina Maajah.
Boqoraddii Balqiisa – Eebbe ha ka raali noqdee
Maalin maalmaha ka mid ah ayey ka kacday hurdadeedii goor aroor hore ah iyadoo isu diyaarineyso iney aadaan macbadka qoraxda iyada iyo dadkeedii reer Saba’ si ay u soo
caabudaan qoraxda. Isla xiligaas waxaa noolaa nebi Saleebaan n.k., isaga iyo ciidankiisana waxay caabudi jireen Eebbe. Eebbana wuxuu siiyey nebi Saleebaan boqortooyo weyn. Wuxuuna sameystay nebi Saleebaan ciidan weyn oo ka kooban dadka, jinka iyo shimbiraha. Nebi Saleebaan wuxuu soo booqan jirey ciidankiisii mararka qarkood.
Markaas buu wuxuu waayey shimbirkii Hudhudka ahaa maalin maalmaha ka mid ah, dabadeed baa waxaa yimid Hudhudkii markuu maqnaa in muddo ah. Wuxuuna ku yiri nebi Saleebaan waxaan ka imid Saba’, waxaana kaaga sidaa war run ah oo waxaan ku soo arkey goobtaasi naag boqorad ah oo la siiyey wax walba, waxayna caabudayeen iyada iyo dadkeedaba qoraxda.
Markaas ka dib buu nebi Saleebaan wuxuu qorey warqad, wuxuuna faray Hudhudkii inuu u geeyo warqaddaasi boqoraddii Saba’. Hudhudkiina wuxuu u geeyay warqaddii Balqiisa, waxayna isugu yeertay madaxdeedii si ay ula tashato, waxayna u sheegtay iney warqad ka heshay nebi Saleebaan kuna yiri ha isla key weynaanina iina imaada idinkoo muslimiin ah. Kolkaas ayey Balqiisa iyo madaxdeedii waaweynaa u tageen nebi Saleebaan. Ka dib markii Balqiisa ay aragtey wuxuu Eebbe siiyey nebi Saleebaan ayey muslintey iyada iyo dadkeediiba, waxaana guursadey nebi Saleebaan.
Marwo Maryan – Eebbe ha ka raali noqdee
Rasuulkii Eebbana wuxuu ka yiri: (Dumarkii adduunka ugu wanaagsanaa waxay ahaayeen: Maryan, Aasiyo, Khadiijo iyo Faadumo). ina Xibbaan.
Dhalinyaradii godka – Eebbe ha ka raali noqdee
Dhalinyaradii waxay go’aansadeen iney ka baxaan tuuladii, iyagoo ku socda god cidlo’ ah si ay ugu badbaadaan. Waxay ka baxeen tuuladii balaarneed iyagoo la socdo eygoodii kuna socda god ciriiri ah. Waxay uga soo tageen guryahoodii raaxada badnaa, iney degaan god cidlo’ ah.
Waxay ka soo tageen qololkoodii, sariirahoodii, oo ay doorteen god ciriiri ah oo mugdi ah.
Waxay dhalinyaradii seexdeen godkii, wuxuu fariistay eygoodii iriddii godka isagoo ilaalinaya.
Markaasi baa waxaa dhacday mucjiso Ilaahi ah, maxaa yeelay dhalinyaradii waxay seexdeen saddax boqol iyo sagaal sanadood. Intii u dhexeysey mudadaasi, qoraxdu waxay ka soo baxeysey dhinaca midig ee godkoodii waxayna u dheceysey dhinaciisa koonfureed, mana soo gaari jirin falaaraheeda maalinta gelinkeeda hore iyo gelinkeeda dambeba. Weyna is gedgedin jireen intey hurdayeen, si aaney jirkoodu wax u gaarin.
Qofkii arki lahaana wuu cabsan lahaa, maxaa yeelay wey hurdaan, hase ahaatee waa iyagii oo soojeeda marba siday dhinac isugu gedgedinayaan darteed.
Saddax boqol oo sanadood ka dib, Eebbe ayaa mar kale soo saaray. Waxay ka kaceen hurdadii dheereed, hase ahaatee ma aysan ogeyn intey hurdayeen. Waxaana ka muuqatay iney muddo dheer hurdayeen. Waxay is weydiiyeen: meeqa ayaanu hurdaynay?! markaasay isu jawaabeen: waxaanu hurdeyney maalin ama maalin barkeed. Waxay la soo baxeen lacagtii ay wateen, ka dibna mid iyaga ka mid ah ayey weydiisteen inuu magaalada aado si uu ugu soo gado lacagtii cunto wanaagsan, oo dabadeed si dhuumasho leh ugu soo noqdo iyadoon qofna dareemin, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa iney ciqaabaan ciidanka boqorka ama kuwo kale oo xumaan falayaasha tuulada ka mid ah hadday ogaadaan arintooda. Oo waxaa dhacda in la yiraahdo kala doorta haddaad rabtaan inaad noolaataan waa inaad Eebbe caabudistiisa ilaahyo kale la wadaajisaan sidii hore oo kale, haddaad diiddaana waa la idin dhagaxeen intaad ka dhimaneysaan.
Ninkii mu’minkii ahaa wuxuu soo aaday tuuladii, hase yeeshee maba aha tuuladii uu yaqaanay.
Tuuladii dhismayaalkeedii iyo guryaheedii wey is bedeleen, sidoo kale waxaa is bedeley cuntadii iyo lacagtii, wuxuu la fajacay sidee iskugu bedeli kartaa tuuladii maalin iyo habeen gudaheed.
Dabcan dadkii tuulada degganaa iyagana waxay la yaabeen ninkii dharkiisa iyo lacagtii uu watey.
Waxaa mahad iska leh Eebbe, kaasoo galaddiisu ku dhamaadaan wanaagyaalku…